Ego Bitcoin VS Bitcoin - Blogt Wildtornado - latabernasanlucar.com
Ọ bụrụ na ị bụ onye ịgba chaa chaa hụrụn’anya na-etinye oge na Bitcoin casinos na-egwu egwuregwu BTC ma ị nwekwara mmasịn’ụdị ndị ọzọ nke itinye self crypto dị ka Bitcoin Money, isiokwu a bụ maka gị.
Ihe ịhọrọ: Bitcoin ma ọ bụ Bitcoin Money? A na-eji mkpụrụ self love abụọ that an’ọtụtụ ebe na casinos kacha mma ma na-enye ọtụtụ ndị egwuregwu egwuregwu. Iji nyere gị aka ịghọta ihe dị iche na nke abụọ cryptos, anyị na-atụ aro ka ị lelee njem ndị ụdị self eletrik abụọ a ama ama nwere. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkwụsị ịgụ edemede a ma kpọọ egwuregwu BTC n’efu, anyị agaghị akwụsị gị, bro! Bitcoinlọ cha cha Bitcoin anyị nwere free spins Id ihe ụtọ Bitcoin ndị ọzọ na-atọ ụtọ – sonyere ọtụtụ puku ndị egwuregwu egwuregwu egwuregwu cellular WildTornado nwere obi ụtọ ugbu a!
N’anya Satoshi Nakamoto, Bitcoin nwere ihe niile ọ ga – eme iji meziwanye ndụ ndị mmadụ websiten’inye ha nnwere onwe ego. Kedu ụdị nnwere onwe ụmụ mmadụ na-enweta na Bitcoin, ị nwere ike ịjụ? Ọfọn, kama inye ikike ịchịkwa self ha d e etiti akụ d e ndị ọzọ, ego dijitalụ ọhụụ na-enyere ndị mmadụ aka ijide mkpịsị ugodi nke aka ha ma kwụọ ụgwọ self na nchekwa ọ bụla na enweghị enyemaka nke ndị etiti, nke pụtara ịkwụ ụgwọ azụmahịa efu ụgwọ.
A na-echekwa azụmahịa azụmahịa Bitcoin niile na blockcheni, ihe ndekọ ederede dijitalụ na-enweghị oke, ma netwọkụ nnwere onwe nke kọmputa (‘ọnụ’) gosipụtara na ụwa niile. Ndị na-egwuputa ihe, ndị nwere ọnụ, na-agbakwunye mgbochi pụrụ iche d e akwụkwọ ndekọ ka ha na-edozi ihe mgbagwoju anya mgbagwoju anya. Ihe mkpịsị aka pụrụ iche nke ngọngọ ọ bụla nwere yana akpọrọ’nkwekọrịta nkwekọrịta’ (akụkọ nchịkọta akụkọ nke akụkụ niile na-akọrọ) na-eme ka azụmahịa Bitcoin nwee ntụkwasị obi ma nwee ọgụ na mwakpo cookie cutter.
Ọ bụ ezie na Bitcoin na-enye ihe ngwọta dị ebube maka ịdabere t self ndị mmadụ na gọọmentị na ụlọ akụ, enwere otu nsogbu t self ọhụụ a. Iji mee ka o doo anya, enwere ụfọdụ nsogbu ọrụaka na usoro Bitcoin mining nke na-egbochi mkpụrụ self a ka ọ ghara ịba ụba nke ọma. Ọchịchọ na-eto eto maka Bitcoin rụpụtara azụmahịa na-adịghị ngwa ngwa. Iji mee ka ihe doo anya, Visa na-eme azụmahịa 1,700 kwa elekere abụọ d e nkezi ebe blockchain nwere ikike ịme naanị azụmahịa 7 kwa nkeji.
Site na nke a, ndị mmepe na ndị na-egwuputa Bitcoin ga-echepụta echiche ọhụrụ banyere otu esi eme ka ọsọ nke azụmahịa crypto mụbaa. Enwere ụzọ abụọ. Nke mbu, ime ka onu ogugu information nke dabere d e nkwenye di obere. Nke abuo, iji mee ka ngọngọ information buru ibu, nke na-enye ohere maka ịmatakwu ozin’otu oge. Ego ego Bitcoin pụtara website Id ngwọta ndị that a kpọtụrụ ahan’elu.
Na 2017, ndị mmepe webatara Bitcoin Cash (BCH) ndụdụ siri ike na ụwa crypto. Ihe ohuru ohuru that a dabere t na ngọngọ un ma nwee ọnụ dị mkpa na Bitcoin. Iji doo anya, Bitcoin Cash block dimensions nke 8 MB nyeere self indulgent a aka iji hụ na azụmahịa ngwa ngwa dịka usoro nyocha have been obere oge. Mgbe ahụ,n’ime otu afọ, a gbatịrị nha nke BCH na 32 MB ebe ebe Bitcoin na-anọgide na-ejedebe t 1 MB ihere.
BCH, un simple, nwere ikike ịhazi azụmahịa ngwa ngwa karịa Bitcoin, nke sụgharịrịn’ime oge nchere dị mkpirikpi na obere ụgwọ azụmahịa. Ọ bụ ezie na Bitcoin Cash dozie nsogbu esemokwu nke Bitcoin na-eche ihu, nnukwu blọgụ ndị e kere na BCH blockchain adabaghị na nchekwa nke netwọk Bitcoin. Na mgbakwunye, BTC bụ nnukwu self service dijitalụ website Id okpu ahịa, ma si otú a bụrụ nkịta kachasị elun’etiti cryptos.
Taa, BTC na BCH nwere ọrụ abụọ dị iche iche na ụwa cryptocurrency. N’ịbụ onye na-ejigide uru mbụ ya, nke mbụ crypto bụ nke kachasị mma ugbu a – ọ hụbeghị ụdị rọketi ọnụahịa ya na ogo ọhụrụ. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị nyochala nyocha ọhụụ Bitcoin, ị nwere ike ịmaraworị amụma ọhụrụ na uru Bitcoin ga-arị elu karịa 100,000 buck t August 2021. N’aka nke ọzọ, BCH enwetakwala uru karịa ka netwọkụ nwere dọtara ndị na-etinye ego na ọrụ ndị ọzọ. Ma ị kpebiri ịga Bitcoin ma ọ bụ họrọ itinye self love gị na Bitcoin Cash, mkpụrụ self service abụọ ahụ na-enye gị nnukwu uru ego.
Ọ bụrụn’ị na-achọ cha cha cha cha cha cha cha, ị ga – ejiden’aka d e WildTornado bụ oke nhọrọ! Emikpu onwe gịn’ime ala mara mma nke narị narị trendiest Bitcoin egwuregwu, website Id oghere t blackjack ọbụna roulette. Aso, anyị Bitcoin ndụ cha cha bụ isi iyi nke oge egwu oge immersive ebe ohere mmeri na-adịghị agwụ agwụ na ọkwa dị egwu dị elu!